Ciidamada Ahlu Sunna iyo madaxdooda ayaa u jihaystay tuulo 16km dhanka bari ka xigta magaalada, waxaase la is weeydiinayaa maxaa xigi doona arrinkan? | Dayniile.com
Home Warkii Ciidamada Ahlu Sunna iyo madaxdooda ayaa u jihaystay tuulo 16km dhanka bari...
Ciidamada Ahlu Sunna iyo madaxdooda ayaa u jihaystay tuulo 16km dhanka bari ka xigta magaalada, waxaase la is weeydiinayaa maxaa xigi doona arrinkan?
Wararka ka imanaya magaalada Guriceel ayaa sheegaya in ciidamada Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka ay gebi ahaanba la wareegeen gacan ku haynta magaalada Guriceel oo maalmahan si daran ay ugu hardamayeen iyaga iyo ciidamada Ahlu Sunna Wal jamaaca.
Sida uu wararka la helaayo ay sheegayaan weriye ku sugan magaalada Guriceel oo magaciisu yahay Cabdiqaadir Guure Bare, waxaa guuleystay wadahadaladii laga dhex waday Ahlu Sunna iyo iyo Galmudug.
“Arrimaha wadahadalka xilli dambe oo xalay ah ayay soo xoogaysteen, waxaana garwadeeb ka ahaa Senator Cabdi Cawaale Qeybdiid iyo Senator Dhagay Geele iyo Ganacsade Xaashi Carabay, dhanka Ahlu Sunna Sheekh Shaakir waa uu aqbalay, ciidamadiina magaalada waa uu ka saaray, waxayna ciidamada tageen deegaanka Goodwiil, oo qiyaastii magaalada u jirta oo 16 km ah u jirta Guriceel, ciidamada Galmudug ayaana la wareegay fariisimihii ay ka baxeen Ahlu Sunna” ayuu yiri.
Dhanka Ahlu Sunna weli wax war ah kama aysan soo saarin ka bixitaanka magaalada.
Ahlu Sunna ayaa ka baxay meeshii ugu damabaysay ee ay ku sugnaayeen oo ahayd halka loo yaqaano Jaamacadda, mana la oga halka ay ku suganyihiin madaxdii ururkan.
Dagaal seddex maalmood ah oo qaraar, qasaare badana uu ka dhashay ayaa ka dhacay magaalada kadib markii bishii hore si lama filaan ah ay xoogaga Ahlu Sunna ula wareegeen magaaladan muhiimka ah.
Wadahadalo la isku dayay dhawr jeer ayaa fashilmay, iyada oo ciidamada dowlada ay todobaad kasta kusii dhowaanayeen magaalada, illaa markii dambe ay jihooyin badan ka degaan.
War lagu soo daabacay idaacadda dowladda ee Raadiyoow Muqdisho ayaa lagu sheegay in ciidamada Ahlu Sunna ay ka tageen gaadiid dagaal oo ay Galmudug ay kaga qabsadeen dagaal bishii hore ka dhacay deegaanka Bohol. Warka Radio Muqdishow ayaa sidoo kale tubaaxaya in maydad loogu tagay goobihii ay ka baxeen Ahlu Sunna. Balse BBC-da ma xaqiijin karto warkan.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dhinacyo Soomaali iyo Ajnabi ahba ay ku lug leeyihiin dagaalka Guriceel , islamarkaasna ay ‘gadaal ka taaganyihiin’ kooxda Ahlu Sunna. Qoorqoor ma uusan sheegin kuwa ay yihiin dhinacyadaas, balse wuxuu sheegay in ay hayaan caddaymo ay soo bandhigi doonaan marka waqtigeeda la gaaro.
Waxa uu madaxda Ahlu Sunna ku eedeeyay in ay yihiin kuwa xil iyo dano gaar ah raadinaya.
Dhanka kale waxa uu isbitaalada ugu baaqay in si aan kala sooc lahayn loo wada daaweeyo dhaawacyada labada dhinac.
Awoodda Ahlu Sunna
Previous articleMaxaa Sababay in Ahlsunna si fudud iskaga baxdo Guriceel
Next articleMeydad lagu arkay Xaafado katirsan Guriceel
MADAXWEYNE FARMAAJO OO WARQADAHA AQOONSIGA KA GUDDOOMAY DANJIRAHA DALKA FINLAND
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa munaasabad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaranka, waxa uu kaga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirenimo safiirka cusub ee...
Taliye ku xigeenkii ciidanka PSF oo u soo Wareegay dhinaca maamulka...